Fiainana eny amin’ny torapasika: Ny nanovàn’ny COVID-19 ny fizahantany ao amorontsirak’i Albania · Global Voices teny Malagasy
Fanasarahana fandriana, fanakaramàna mpandrindra ady amin'ny Covid-19, fanelanelànana ireo mpilomano.
Nandika (fr) i Amelie
Voadika ny 22 Jona 2020 13:12 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Shqip, Français, Español, Ελληνικά, українська, 日本語, عربي, English
Torapasika mampitolagaga no atolotr'i Albania ho anao, toy ny ao Ksamil any atsimon'ny firenena. Sary an'i Ardi Pulaj, nahazoana alàlana.
Ny Alahady voalohany tamin'ny volana May, na teo aza ireo fepetra napetraky ny manampahefana Albaney momba ny tsy fahazoana mivezivezy, nirohotra namonjy torapasika ny mponina. Am-polony maro ry zareo, niandahy sy niambavy, no tazana nidoladola sy nanararaotra ny hafanàna tao Golem, tanàna iray amorontsiraka ao amin'ny faripiadidian'i Kavaja.
Ho fiomanana amin'ny fifaneraseràna rehefa fotoanan'ny fahavaratra, nandrafitra tondrozotra iray momba ny fahasalamàna ireo manampahefana albaney, izay ho apetraka hiadiana amin'ilay valanaretina.
Na henjana ho an'ny asa aza ireny fepetra vaovao ireny, velom-panantenana ny minisitra misahana ny fizahantany sy ny tontolo iainana, Bledi Klosi, ary mino ny fiarenann'ny indostrian'ny fizahantany ao an-toerana.
Mandritra ny fotoam-pahavaratra, betsaka no azon'i Albania atolotra, miaraka amin'ireo morontsiraka ao aminy mifanolotra amin'ny ranomasina Adriatika sy Iôniàna ary ireo tendrombohitra mirenty mahafinaritra.
Torapasika mitokantokana ao #Albania. Samy manana ny zavamiafiny sy ny toerana tsiambaratelony daholo ny fivahinianana tsirairay . . .pic.twitter.com/HiHeXkRv4l
? ALBANIA ? Ireo toerana tsara indrindra tokony tsidihana ! Alamino ny fivahiniananao ao Albania : fantaro izay hotsidihana sy hatao ! Ireo torapasika tsara indrindra : ireo nosy Ksamil, ireo rano madio mangatsankatsaka ao Gjipe, ny torapasika ao Dhermi … Jala, Himara … Ireo vakoky ny ela amin'ilay bazilika rômana tranainy ao Butrint … ary toerana marobe hafa. pic.twitter.com/FcDPKiUAaQ
6,4 tapitrisa ireo vahiny mpizahatany tonga nitsidika an'i Albania tamin'ny 2019, fitomboana 8,1 % raha mitaha amin'ny taona 2018. Hatramin'ny Martsa no nakatona ny habakabaka sy ny sisintany rehetra ary tsy misy mihitsy marika amantarana fa hoe hiverina hivoha izy ireny.
Vinavinan'ireo manampahefana grika sy ny Fiombonambe Eorôpeàna ny hametraka « pasipaoro milaza fa voaaro amin'ny aretina »/« pasipaorom-pahasalamàna » na koa « sertifikà milaza fa tsy misy ahiana ».
Na izany aza, ampahatsiahivin'ny Fikambanana Erantany Misahana ny Fahasalamàna (OMS) tsy mbola misy aloha hatreto ny porofo ahafahana milaza hoe ireo olona sitrana tamin'ny Covid-19 ary namokatra hery fanefitra (anticorps) dia voaaro tsy ho tratra intsony any aoriana.
Hoy ny Agence France Presse :
Ezahan'ny mpitantana torapasika iray an'olontsotra ao Porto Cesareo [fr], tanàna kely iray amorontsiraka nampitondraina anarana hoe « Karaiba » any Apulia (Pouilles) [fr], ny manao ho hita maso ireo fepetran'ny elanelana sôsialy amin'ny alàlan'ny fametrahana seza sy elobe mielanelana 1,5 metatra. Ampiasainy ihany koa ny tady mba hamaritana ireo toerana ho an'ireo mpiala sasatra ho avy.
Tsidiho ny fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fiantraika mivantana erantanin'ny COVID-19 [fr].